Maki: weird al yankovich | Martech Zone
Maki: weird al yankovich
Iwe unofanirwa kuda "Weird Al". Akarova chord inoshamisa nenziyo iyi .. Ndine shamwari dzakawanda nemhuri izvo neimwe nzira vanotenda kuti vari basa paInternet kutumira zvese… pasina kuzvitarisa kuti virii, pasina kutarisa kushanda kwayo paSnopes, kana kusafunga kuti ndiri ndakabatikana zvakanyanya kuti ndione mifananidzo makumi mana nenomwe yevakanunurwa [isa mwana akanaka mhuka]. Hazvishamise kuti ava ndivo vanhu vanosvikawo
Kuwedzera traffic. Wese munhu anoita kunge ane hanya nekutora zvirimo kunze uko kunzvimbo zhinji nekutsvaga kwavanogona. Kune bhizinesi, zvinogara zvichitonhorera kuti uwane kuzivikanwa kwenyika kana kwedunhu uko kunowana imwe kufarira kuyerera mukambani yako. Ndiyo chaiyo traffic, zvakadaro? Kushanda muindasitiri yePepanhau kwakandipa kutaridzika kunonakidza kwekutsvaga kusinganzwisisike kwemamwe maziso eziso. Mapepanhau mazhinji anoramba achidzikisa (uye kudzikisira) pepanhau ravo kungo